Puntland:-Ciidamo ka tirsan Puntland oo isku dhiibay Somaliland Majirto. - Awdinle Online
Puntland:-Ciidamo ka tirsan Puntland oo isku dhiibay Somaliland Majirto.
December 2, 2019 (Awdinle Online) –Cali Axmed Sabarey Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Puntland ayaa beeniyay in ciidamo katirsan Puntland oo ku sugnaa degmada Taleex ee gobolka Sool ay ku biireen dhinaca Maamulka Somaliland.
Wasiirka warfaafinta oo Garowe kula hadlay warbaahinta maxaliga ah, ayaa sheegay ciidamada lagusoo bandhigay Taleex inay yihiin maleyshiyo beeleed loo galiyay dareeska ciidanka oo horay halkaasi ku sugnaa.
Sabarey ayaa hadalkiisa ku daray inaanay jirin awood xilligaan Somaliland kula wareegi karto ciidamadooda, isagoo tilmaamay Somaliland gudaheeda inuu ka jiro jahweerar siyaasadeed.
Wasiirka Puntland Cali Axmed Sabarey ayaa sheegay in ciidanka Puntland ay ku suganyihiin xeryahooda,isla markaana ay qaataan Mushaaraadkooda.
Maalintii shalay ayay ahayd markii wasiirka warfaafinta Somaliland, Saleebaan Cali Koore uu degmada Taleex kusoo bandhigay askar uu ku tilmaamay in ay yihiin ciidamadii Puntland ee ku sugnaa degaanka God-qaboobe ee hoostaga degmada Tukaraq.
Wasiirka iyo xubno kale oo ka socda Somaliland ayaa ku sugan Taleex oo ka mid ah deegaanada ay isku muransanyihiin Maamulada Puntland iyo Somaliland,waxaana halkaasi ka howlgala maleeshiyaad marba dhinac ku biira.
Previous articleTaliyayaasha Ciidan ee Dalalka Bariga Afrika oo ku Shirsan Uganda
Next articleMa Dhabbaa In Haweenka Ku Nool Kenya Intooda Badan Caruurtooda Ku Dila Coca-Cola.